DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Laki Man. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Laki Man.
Noofember 6, 2016 3:34 b 0
Caabudwaaq, Nov 06 2016–Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada Daljir oo maanya xiiso gaar ah xambaarsan, waxaana xarunta Daljir Caabudwaaq kasoo jeedinay Cumar Laki Man.
DHEGEYSO-Shirkii Jaraa’id ee Afhayeenka Madaxtooyada Dowladda Puntland.
WAR SAXAAFADEED-Dowladda Puntland oo kahadashay dagaalka Galkacyo.